के तपाईंको घाँ टीको ख स खस हुन्छ ? यी हुन् घाँटीको खसखस हटाउने केही घरेलु उपाय – Khabaarpati
December 23, 2020 Khabar PatiLeaveaComment on के तपाईंको घाँ टीको ख स खस हुन्छ ? यी हुन् घाँटीको खसखस हटाउने केही घरेलु उपाय
नूनपानीले कुल्ला गरौं : संसारमा नै गरिएको शोध र अध्ययनबाट प्रमाणित भएको कुरा यो हो कि नूनपानी हल्का तातो बनाएर कुल्ला गर्दा घाँटीको दुखाई र खसखसबाट मुक्त रहन सकिन्छ । चिकित्सकहरूले पनि यस्तै सल्लाह दिने गर्दछन् ।कफ सिरप लिन सकिन्छ : यस्तो अवस्थामा कफ सिरप लिन सकिन्छ । तर, यो कुन समयमा कसरी लिने भन्नेबारे जानकारी हुनुपर्दछ । यसले आरामको साथसाथै राम्रो निद्रा पनि ल्याउन मद्दत गर्दछ ।